ISri Lanka ilungele ukwamkela abakhenkethi bamanye amazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula Iindaba zaseSri Lanka » ISri Lanka ilungele ukwamkela abakhenkethi bamanye amazwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula Iindaba zaseSri Lanka • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
ISri Lanka ikulungele ukwamkela abakhenkethi bamanye amazwe0
Ukuvulwa kwakhona kokhenketho eSri Lanka kubakhenkethi bamanye amazwe
Abasemagunyeni eSri Lankan babhengeze ukuba ilizwe lilungele ukwamkela abakhenkethi bamanye amazwe ukusuka nge-21 kaJanuwari.
"Kuthathwe onke amanyathelo okhuseleko ukuqinisekisa ukuba ezinye zikhuselekile, zithembekile kwaye zizolile kangangoko kubakhenkethi," yatsho i-Ofisi yoKhuthazo loKhenketho eSri Lanka.
Kodwa abahambi bamanye amazwe kuya kufuneka balandele imigaqo ethile.
Ngaphambi kohambo, kufuneka babhukishe ihotele ukuze babe nokuvalelwa bodwa iiveki ezimbini. Ngapha koko, ihotele kufuneka iqinisekiswe ngokusesikweni ngenxa yokuvalelwa ngokwakho. Inkqubo ye- Covid-19 uvavanyo malugqitywe iiyure ezingama-96 ngaphambi kokumka eSri Lanka.
Uvavanyo lwesibini lwenziwa ehotele emva koko ngomhla we-7 wedwa. Kwakhona, abakhenkethi kufuneka babe ne-visa kunye ne-inshurensi nabo. IVisa inokufumaneka kwiwebhusayithi yeSebe leMfuduko, kunye neinshurensi- kwinkampani yeinshurensi yalapha ye-People's Insurance PLC.
Kwiiveki ezimbini zokuqala, abakhenkethi banokuhamba ngokukhenketha kuphela ngezikhokelo ezisemthethweni. Kodwa emva kokuvalelwa yedwa, ungahamba ujikeleze isiqithi ngaphandle kokuhamba nabantu.
I-Uganda ikhupha i-intanethi yesicelo se-visa
Yeyiphi eyona ndawo abakhenkethi bahloniphekileyo kuyo?
Ukuhambela eThailand? Zilungiselele ukuthatha i-3 COVID-19 ...